वस्तुभाउ चराउन जंगल गएका स्थानीयलाई चार वटा बाघले एकैपटक घेरेपछि…. — Sanchar Kendra
वस्तुभाउ चराउन जंगल गएका स्थानीयलाई चार वटा बाघले एकैपटक घेरेपछि….
काठमाडाैं । शनिबार दिउँसो साढे १ बज्दै थियो। एकाएक चार वटा बाघले राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं. १ गाभरका स्थानीय २५ वर्षीया हिरा खड्का, २४ वर्षीया कालिका खड्का र ५६ बर्षीय सेतु ओलीलाई घेरा हाले।
उनीहरु भैंसी र बाख्रा लगेर छोटी दमारमाको जंगलमा चराउन गएका थिए। यो उनीहरूको घरदेखि करिब दुई किलो मिटर नजिकको सामुदायिक वन क्षेत्र हो। घटनास्थल पूर्व-पश्चिम राजमार्गदेखि करिब एक किलोमिटर दक्षिणमा पर्छ।
‘बाघले मलाई र बाख्रालाई टार्गेट गरेर झम्टने प्रयास गर्‍यो,’ ओलीले भने, ‘मैले र दुई नानीहरू सबैले हाट्टहुट्ट गरेँ, छिटो-छिटो रुखमा चढ्यौं।’ ओलीका अनुसार चार वटै बाघ ठूला गोरुजस्तै मोटा थिए।
रुखमा चढेर उनीहरूले हारगुहार गरिरहे। तैपनि बाघको समूह आफ्नो घेरा झनै साँघुरा बनाउन थाले। ठिक त्यही बेला उनीहरूको गुहार सुनेर नजिकै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका दुई हात्ती चराउँदै गरेका माउतेहरू आइपुगे।
गाभरमा हालसालै एक जना भारतीय नागरिकलाई राजमार्ग क्षेत्रबाट झम्टिएर बाघले आक्रमण गरेपछि दुई हात्ती बाघको निरीक्षण गर्न सहज होस भनेर गाभरमै ल्यार राखिएको छ। गोठालाहरू कराएपछि र हात्ती आएपछि बाघ पछि हटे।
त्यहाँ झन्डै ९० वटा जति बाख्रा थिए। त्यसपछि बाघ भैंसीको पछि लागे। भैंसी लखेट्न थाले। एउटा हात्ती बाघको घेराबाट भैंसीलाई बचाउन भन्दै बाघका पछिपछि लगियो। बाघले लखेटेपछि भैंसी राप्ती नदीमा हेलिए। पाँच भैंसी राप्ती नदीको भेल तरेर पल्लो किनार खर्चवा भन्ने ठाउँ पुगे।
‘राप्तीमा ठूलो पानी छ। त्यो तरेर पारिपट्टी जान सम्भव छैन,’ ओलीले भने, ‘खर्चेमा पनि बस्ती छ, त्यहाँका स्थानीयसँग हामीले फोनमा कुरा गरेका छौं, अब भोलि गएर भैंसी लिएर आउँछौं।’ एउटा सानो पाडो भने जंगलमै गायब भएको ओलीले बताए। ‘त्यो पाडोलाई बाघले खाइसके वा राति आएर आहार बनाउँछन् त्यो कुराको अत्तोपत्तो भएन,’ ओलीले भने।
बाघ भैंसी लखेट्दै गएपछि ओली र अर्की एकजना महिलाले दौडाएर बाख्रा जंगलबाट धपाउँदै घरतर्फ ल्याए। हात्ती पनि साथमै थियो। त्यसअघि बाघले घेरा हाल्दा ज्यान जोगाउन रुखमा चढेकामध्ये दुई महिलालाई हात्तीले एकै खेपमा सुरक्षित ठाउँमा पुर्‍यायो। रुखमै बसेका अर्का एक जनालाई भने अर्को खेपमा हात्तीबाट उद्धार गरी ल्याइएको बाँके राष्टिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गेहेन्द्रकुमार खड्काले सेतोपाटीलाई बताए।
‘अहिले पनि डरले मेरो मुटु काँपिरहेको छ,’ ओलीले भने, ‘रातिमा दिसा-पिशाब गर्न जान समेत डर लाग्ने गर्छ।’ सहर बजारमा जस्तो घरभित्रै शौचालय गाएँमा हुँदैनन्। घरभन्दा टाढा केही दुरीमा मात्रै शौचालय निर्माण गरिएको हुँदा बाघको त्रासले रातमा बाहिर निस्किन डर लाग्ने गरेको उनले बताए।
राप्ती सोनारी-१ कुसुमका स्थानीय खड्काका अनुसार विगत एक डेढ महिनायता बाघ गाभर क्षेत्रमा दिनमा चार-पाँच पटकसम्म राजमार्ग भएर ओहोरदोहोर गर्ने गरेका छन्। उनले आफूहरूको क्यामेरामा एकै साथ ६ वटा पाटेबाघको बथान हिड्ने गरेको रेकर्ड भएको बताए। चार वटा वयस्क, एउटा बच्चा र अर्को एउटा बुढो बाघ साथसाथै हिँड्ने गरेको उनले बताए।
केही दिन पहिले मात्रै बाघले एक जना मानिस खाएपछि पछिल्लो समय गाभर क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसमेत हात्तीसहित खटाउँदै आइएको छ। स्थानीयले पनि सुरक्षाको लागि जताजता माउतेले हात्ती चराउन लैजान्छन् सुरक्षाको लागि उतैउतै आफ्ना वस्तुभाउ चराउन लैजाने गरेको खड्काले जानकारी दिए। सेताेपाटीबाट साभार